Knuddels - Wir bringen Menschen zusammen. 5.60 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.60 လြန္ခဲ့ေသာ3လက
Application မ်ား ခ်ိန္းေတြ႕ျခင္း Knuddels - Wir bringen Menschen zusammen.
Knuddels - Wir bringen Menschen zusammen. ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်နှင့်အတူ chat ။ ရိုးရှင်းစွာချက်တင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်သစ်ကိုမိတ်ဆွေများနှင့်ရက်စွဲများကစားပေမယ့်ဂျာမဏီကနေထူးခြားတဲ့နှင့်အကြီးဆုံးမြို့မှာချက်တင်အသိုင်းအဝိုင်း။ အခုဆိုရင်အခမဲ့ 100% မှတ်ပုံတင်။
ကျနော်တို့ 1999 Knuddels များအတွက်ပစ်မှတ်ထားပြီ: ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ငွိမျးခမျြးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်တစ်မိသားစုလေထုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ရာအတွက်ထူးခြားတဲ့နှင့်ပွင့်လင်းအသိုင်းအဝိုင်းဖန်တီးချင်တယ်။ ဤတွင် Knuddels ကျနော်တို့ Channel ကိုမခေါ်ကြောင်းအများကြီးကွဲပြားခြားနားသောထောင့်များနှင့်နေရာများရှိပါသည်ဘယ်မှာကြီးမားတဲ့ပျူငှါနွေးထွေးသောကဖေးမှနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစဘယ်မှာသင်အလျင်အမြန်စကားပြောဆိုမှုသို့တစ်ခုသို့မဟုတ်ပရောပငျတှေ့တဲ့အကြီးအဘားပေးသည်။ ဒါပေမယ့် Knuddels သင်တို့ကိုလည်းအလားတူအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူအတော်လေးတစ်ဦးတည်းမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်သိရန်ရနိုင်ရှိရာအများအပြားသေးငယ်တဲ့အခန်းပေါင်းပေးထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါလေးပါးအမာခံတန်ဖိုးများအားဖြင့်ပဲ့ထိန်းနေကြသည်။ သင်, အတူတကွပျော်စရာရှိသည်ဖို့လိုစာနာထောကျအကူပွုနှင့်ဖော်ရွေဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ 1 သန်းတက်ကြွစွာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်းစီအကောင်းတစ်ဦးအချိန်ရှိခြင်းကြောင့်သေချာ။ မအပေါ်ယံ flirtation သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းသောချိန်းတွေ့အရေးကြီးပါတယ်ပေမယ့်အတူသေကြ၏။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းလူတွေအတွက်အတူတကွဆောင်ခဲ့ဖွငျ့ဤအောင်မြင်ရန်နှင့်သူတို့ကိုလွတ်လပ်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးပါ။ ဤသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းအဆက်အသွယ်များ, လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများ flirtations နှင့်အတူကောင်းသောပြောဆိုမှုများအားဖြင့်သို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသောဂုဏ်ထူးဆောင်ရာထူး၏ပါဝင်မှုအားဖြင့်သိရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ချက်တင်သင်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အလားအလာမိတ်ဖက်ကိုရှာဖွေကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာအခွင့်အလမ်းပေးထားပါတယ်။ သငျသညျသစ်ကိုပရောပရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ဥပမာ, channel ကိုပရောပ, Knuddels.de အပေါ် 400 chatrooms ၏တဦးတည်းထွက်စစ်ဆေးပါ။ သငျသညျထိအခြားယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှင့်အတူဆော့ကစားရချင်ပါတယ်, သင်ဓာတ်ပုံတွေ့ဆုံကစားနိုင်ပါတယ်။ တောင်မှတစ်အုပ်စုတွင်ကစားရန်ပိုနှစ်သက်သူတွေကိုသို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်းဂိမ်းအဘို့ကျနော်တို့ Knuddelonia သို့မဟုတ်ပဟေဠိဖြစ်နိုင်ခြေအဖြစ်ုင်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အခမဲ့အချိန်ဖြုန်းဖို့ရှိသည်။ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရေး၏အဆွေတို့အဘို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုချတ်ရပ်ရွာအခြားအဖွဲ့ဝင်များကိုသိရန်ရရန်ပြီးပြည့်စုံသောပလက်ဖောင်းပေး။ ၏သင်တန်းကသင့်ရဲ့ဧရိယာထဲမှာကောင်းတဲ့အဆက်အသွယ်ရှာပြီးနောက်တစ်နေ့အွန်လိုင်းနေ့စွဲနှင့်တွေ့ဆုံရန်စီစဉ်ုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံပတ်ပတ်လည်များ၏အကူအညီဖြင့်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
သငျသညျအဘယျသို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသနည်း အခုတော့ Knuddels app ကို load နှင့်ဂျာမနီ၏အကြီးဆုံးချက်တင်အသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေနယူးသူငယ်ချင်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကစားနည်းများ, အသိအကျွမ်းတို့နှင့်ကြီးသောပြောဆိုမှုများ!
Knuddels - Wir bringen Menschen zusammen. အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Knuddels - Wir bringen Menschen zusammen. အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Knuddels - Wir bringen Menschen zusammen. အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
lamune စတိုး 49.21k 14.52M
Knuddels - Wir bringen Menschen zusammen. ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Knuddels - Wir bringen Menschen zusammen. အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.60
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.knuddels.de/legal/privacy-policy.html
App Name: Knuddels - Wir bringen Menschen zusammen.
လက်မှတ် SHA1: 50:38:89:7D:35:16:39:41:8F:A5:D8:FD:B6:91:2D:50:53:28:EE:8A
အဖွဲ့အစည်း (O): Knuddels GmbH & Co. KG
နယ်မြေ (L): Ettlingen
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Baden-Württemberg
Knuddels - Wir bringen Menschen zusammen. APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ